China GD-KB-S001 ： Lightweight Baby Stroller, sistemụ njem, nchekwa ụmụaka, ụlọ ọrụ ụmụaka na-arụ ọtụtụ ihe na ndị nrụpụta | GUODA
GD-KB-S001 ： Lightweight Baby Stroller, njem usoro, mma nwa stroller, multifuctional nwa stroller
Ihe eji eme ihe a bu ezigbo nghota nke onu ahia di nma ma buru ezigbo onu ahia nke na adighi oke ibu ka ijide n'aka na enwere ike iji ya mee ihe n'oge obula, mgbe amuru ohuru, nwa ohuru, na oge umuaka.
1.The etiti isi na-mere nke Al alloy, na plastic ka nke mesikwuru naịlọn (PA + iko eriri). Arsgba mgbatị nke atọ nke okwuchi windo ahụ dabara maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, ka nwa ahụ nwee ike ịnụ ụtọ ìhè anyanwụ n'ụzọ ezi uche dị na ya.
2.The njikwa na 5-gia telescopic ukpụhọde nwere ike gbanwee dị ka onye were.
3. Ogwe aka ndị nwere ike iwepụ dị mfe maka ụmụ ọhụrụ ịbanye ma pụọ.
4.The oche kwushin nwere ike gbanwee na atọ Kwadobe na ọ nwere ike ịgbanwe direction si n'ihu na-azụ. Enwere ike ịmegharị oche ma meghee iji gboo mkpa ụmụ ọhụrụ 0-3 afọ.
5.The ụkwụ ihu bụ ujo-adọrọ, directional, na ngwa-ntọhapụ. The azụ ụkwụ na-awụ akpata oyi n'ahụ, ngwa-ntọhapụ na otu nzọụkwụ sọrọ brek.
6.On-pịa njikwa retracts nwa stroller.
7.Front wheel: 7 sentimita asatọ. N'azụ ụkwụ: 12 sentimita asatọ. Pu foamed taya (ihe na-eyi na-eguzogide karịa ot Pu wheel) .8.Can-eji ọnụ na-ehi ụra nkata na ụgbọ ala oche.
Nke gara aga: GD-KB-009 ：'smụ nwanyị na-egbuke egbuke na-acha odo odo na nkata, ụmụaka; igwe kwụ otu ebe, ụmụ nwanyị igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu nwa nwanyị, igwe kwụ otu ebe, ịnyịnya pink, ọmarịcha igwe kwụ otu ebe
Osote: GD-KB-S002 ： Baby stroller, light stroller, stroller for baby, comfartable strolller for baby, mma nwa stroller
Usoro njem nwa ọhụrụ nke stroller a bụ ụlọ ahịa na - akwụsịtụ maka ndị nne na nna na - azụ ahịa maka oche ụgbọ ala na ihe eji eme njem. Maka otu ọnụahịa, ndị nne na nna nwere ike ịzụta ha abụọ ọnụ.
Stgbọ ala a bụ igwe eji arụ ọrụ aka nke nwere ike ịnọdụ ala nwa ma ọ bụ obere nwa n'ihi na nkasi obi nkasi obi, stroller nwere ike inyere nwa aka ịrahụ ụra, n'ihi na ọ nwere ike inye ebe nchekwa na ebe dị mma maka nwa izu ike. Stroller nwere ike ịnye ọrụ bara uru n'ime ụlọ yana n'okporo ámá ma ọ bụ n'ogige ntụrụndụ.
Fechaa Baby Stroller